प्रचलनमा आयो ई–पासपोर्ट, शुल्क कति ? - Baikalpikkhabar
प्रचलनमा आयो ई–पासपोर्ट, शुल्क कति ?
काठमाडौं, २ मंसीर/ सरकारले बुधबारबाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण शुरु गरेको छ । राहदानी विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन भर्ने नागरिकले बुधबारदेखि नै ई–पासपोर्टको लागि औंठाछाप (बायोमेट्रिक) दिन जाने मिति र समय पाउन थालेका छन् । करिब ७० लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गरेपछि सरकारले ई-पासपोर्ट वितरण थालेको हो ।
संस्कृतिविद् तथा शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सरकारले पहिलो ई–पासपोर्ट दिएको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले जोशीलाई पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका छन् ।
राहदानी विभागले ठेकदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको एक वर्ष नपुग्दै विद्युतीय रहादानी वितरण गर्न शुरु गर्न सक्नुलाई ऐतिहासिक भनेको छ । सन् २०२० को डिसेम्बर २० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडेन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई–पासपोर्ट छपाइको लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
नेपालको पासपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनेको भन्दै विभागले विगतमा हस्तलिखित राहदानी बाध्यात्मक अवस्थामा हटाइए पनि विद्युतीय राहदानी भने समयमै लागू गर्न सकिएको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।
एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । जिल्लामा पनि क्रमैसँग ई–पासपोर्टको बायोमट्रिक लिनेसहितका व्यवस्था गर्दै जाने विभागले बताएको छ ।
ई–पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल प्रचलनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले ई–पासपोर्टलाई सुरक्षित भनेर परिभाषित गरेकाले धेरै देशले यसलाई अपनाएका छन् ।
यसमा उच्च सेक्युरिटीयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । ई–पासपोर्टको दोस्रो पृष्ठ पोलिकार्बोनेट डाटा पेज हुन्छ । जसमा मोबाइलको सिम जस्तै विद्युतीय ‘चिप’ राखिएको छ । त्यसमै पासपोर्टबाहक व्यक्तिगत विवरणसहित फोटो र बायोमेट्रिक डाटा राखिन्छ । यो पासपोर्टलाई मेसिन/कम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्छ ।
विभागले अब ६ प्रकारका रहादानी जारी गर्नेछ । साधारण राहदानी हलुका खैरो रंगमा हुनेछ । यो राहदानी ३४ पृष्ठ र र ६६ पृष्ठ गरी दुई किसिमका हुनेछन् । धेरै विदेश गइरहनुपर्ने नागरिकले ६४ पृष्ठको राहदानी बनाउन सक्नेछ ।
राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्नने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
बिहिबार, ०२ मंसिर, २०७८, बिहानको ०८:३९ बजे